တရုတ် Triaryl Isopropylated ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | ကံဇာတာ
Triaryl Isopropylated ဖော့စဖိတ်
Triaryl Isopropylated Phosphate, IPPP35 ဟာမွှေးကြိုင်သောအနံ့၊ ပွင့်လင်းမှုရှိသောအရည် - ၇၈-၈၅ (၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)၊ flash point 220 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ ၂၃၅-၂၅၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၄ မီလီမီတာဟဂ်ဂ်)၊ ဘင်ဂျင်၊ အရက်၊ အီအဆင့်များတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော hydrolytic တည်ငြိမ်မှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေနံနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၊ မြင့်မားသော wear ခံနိုင်မှုနှင့် antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့်မီးလျှံတားသောပလပ်စတစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို PVC၊ polyethylene၊ art သားရေ၊ film နှင့် sheet တို့တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ , စာရွက်, ပေါ်ကိုခါးပတ်, ကြမ်းပြင်ပစ္စည်း, ဝါယာကြိုးနှင့် cable ကို, နှင့်ဒြပ်ဗဓေလသစ်, ရာဘာနှင့် cellulose ပလပ်စတစ်, မီးလျှံ; ဓာတ်ဆီသုံးစက်နှိုးခြင်းထိန်းချုပ်ရေးအေးဂျင့်အဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သည်။
ထဲမှာပါတဲ့ (mpa25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်): 42-50
တိကျသောဆွဲငင်အား (20 ° C): 1.183
ဖော့စဖောရက်ပါဝင်မှု (P%): ၈.၆
အက်စစ်တန်ဖိုး (mgKOH / g) - ၀.၁
Chromomaticity (APHA): ≤50
Triaryl Isopropylated Phosphate သည် PVC၊ polyethylene, leatheroid, film, cable, electrical wire, flessive polyurethanes, cellulosic resins နှင့် synthetic rubber အတွက်မီးလျှံတားရန်အကြံပြုသည်။ ပြုပြင်ထားသော PPO၊ polycarbonate နှင့် polycarbonate ရောစပ်ခြင်းများကဲ့သို့သောအင်ဂျင်နီယာဗဓေလသစ်များအတွက်မီးလျှံတားဆီးသည့်လုပ်ဆောင်မှုအကူအညီအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ရေနံခုခံမှု၊ လျှပ်စစ်အထီးကျန်မှုနှင့်မှိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။
ဤပစ္စည်းကိုအောက်ပါထုတ်ကုန်များတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ချောဆီနှင့်အမဲဆီ၊ ဖုံးအုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များ၊ ပိုလီမာများ၊ ကော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်များ၊ ဓာတုဆေးများနှင့်ဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များ။ ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုစက်မှုအသုံးပြုမှုမှပေါင်းစပ်ဖော်မြူလာ၊ ပစ္စည်းဖော်မြူလာနှင့်ဆောင်းပါးထုတ်လုပ်မှုဖော်မြူလာမှထုတ်လွှတ်နိုင်သည်
Triaryl Isopropylated Phosphate ကိုဥရောပစီးပွားရေးinရိယာတွင်တစ်နှစ်လျှင်တန် ၁၀၀၀ - ၁၀၀၀၀ ဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီး (သို့) တင်သွင်းသည်။
ပစ္စည်းများကိုစားသုံးသူများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်သမားများ (ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှု)၊ ဖော်မြူလာသို့မဟုတ်ပြန်လည်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်။
Triaryl isopropylated ဖော့စဖိတ်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်မြင့်မားသော triaryl isopropylated ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်သင်တို့ကိုအမြောက်အများ Ipp 65, reofos 65 ကို၎င်း၏စက်ရုံမှဖွဲ့စည်းရန်ဝယ်ယူရန်စောင့်နေသည်။
1．Synonyms: IPPP၊ Triaryl ဖော့စဖိတ် Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 65, Triaryl ဖော့စဖိတ်2။ မော်လီကျူးအလေးချိန် - 3903. CAS NO .: 68937-41-74 ။ ဖော်မြူလာ: C18H15 R3O4P5． အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အသွင်အပြင် - အရောင်၊ အဝါရောင်ဖျော့ဖျော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအရည် (၂၀ / ၂၀ S) - ၁.၁၅ - ၁.၁၉Acid Value (mgKOH / g): 0.2 maxColor Index (APHA Pt-Co): 80 maxRefractive Index: 1.550- 1.5 1.556Viscosity @ 25 @, cps: 64-75Phosphorus အကြောင်းအရာ%: 8.0min6 ။ အထုပ် - ၂၃၀ ကီလိုဂရမ် / သံထည်ပိုက်ကွန် 50 1150KG / IB ကွန်တိန်နာ၊ ၂၀-၂၃ မက်စ်၊ ISOTANK ။ ဤထုတ်ကုန်သည်အန္တရာယ်ရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ UN3082, CLASS 9
Triaryl isopropylated ဖော့စဖိတ်စျေးနှုန်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုနှင့်အတူပေးအပ်ခြင်း, Zhangjiagang Fortune Chemical Co. , Ltd, သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအလွန်မြင့်မားသော triaryl isopropylated ဖော့စဖိတ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအကြား, ၎င်း၏စက်ရုံမှ triaryl isopropylated phosphate အမြောက်အများကိုသင်ဝယ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။